Twitter @NativeLangsTech 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2019 8:12 GMT
Bitsika avy amin'ny @NativeLangsTech
Manomboka ny Alakamisy 16 Mey, lisitra mifandimby ahitana ireo teratany Amerindiana sy ireo Firenena Voalohany tao Kanada sy Etazonia no hitantana ny kaonty Twitter-n'ny @NativeLangsTech. Arindran'ny Rising Voices sy ny Tetikasa Tenim-pirenena Tandindonin-doza, hatao ao anatin'ny hevitra manodidina ny Taona Iraisam-pirenena ho an'ny Tenim-pirenena Teratany ity hetsika fanentanana eny amin'ny tambajotra sosialy ity ary hanome sehatra ho an'ireo feo rehetra isankarazany manerana ny faritra mba hitantara ny traikefany momba ny fanomezana hery vao ny teny.
Mandritra ny taona 2019 iray manontolo, mpikatroka maro no hifandimby ao amin'ny @NativeLangsTech, hizara ny fomba fijeriny mikasika ny dikan'ny tenin-drazany aminy sy ho an'ny fiarahamoniny. Miasa amin'ny fampiroboroboana ny fampiasana ny teniny avokoa ireo mpikatroka rehetra ireo any amin'ny sehatra vaovao toy ny Aterineto, izay ahitana fahafahana sy fanamby maro . Saingy misy singa iray lehibe tsy an-tambajotra ihany koa amin'ny fikatrohan-dry zareo izay mifamatotra amin'ireo tantara efa ela sy ireo sehatra amin'izao fotoana izao izay mahakasika ny fahaveloman'ireo tenim-pirenena Teratany sy Firenena Voalohany.
Amperiny any Amerika Latina (@ActLenguas) sy any Afrika (@DigiAfricanLang) ny hetsika santatra toy izany izay mampiasa ny Twitter ho toy ny fitaovana, saingy hifantoka amin'ireo teny any Etazonia sy Kanadà ity tetikasa iray ity.
Tena tsara be ny setriny azo tamin'ny fiantsoana fandraisana anjara, efa feno sahady mantsy ny lisitra ho an'ireo herinandro voalohany. Manao hetsika fanentanana ihany koa izahay mba hanasàna olona hafa mba handray anjara.
Hizara ny tantarany manokana mifandraika amin'ny asa miaraka amin'ny fanomezana aina vao ny teny ireo mpandray anjara sasany amin'ny fanasongadinana tsara ny anjara asa entin'ny Aterineto sy ny teknolojia ao anatin'ity asa lehibe ity. Raha ireo hafa kosa misolo tena fikambanana, foko na firenena izay mirotsaka mandritra ny fotoana maharitra mba hanomezana antoka ny fitohizan'ny teniny ho any amin'ny taranaka ho avy, ary manao izany amin'ny fandraisana sy fampifanarahana ny teknolojia mba hamaliana ireo filàn-dry zareo.
Samy tsindrian-daona ny rehetra hizara ireny tantara ireny miaraka amin'ny olona tsy dia mahafantatra ny mikasika ireo tenim-pirenena teratany na ny an'ny Firenena Voalohany tany Etazonia sy Kanadà, ary koa miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina sy mpikatroka hafa izay hahita ny fomba hampiakoan'ireny tantara ireny ny traikefan'izy ireo manokana, fa ihany koa mampianatra momba ireo faritra hafa ao amin'ilay faritra sy ny sehatra manokana misy azy.
(Tsindrio eo amin'ny anaran'ilay mpampiantrano mba hamakiana lahatsoratra am-bilaogy ahitana Fanontaniana&Valiny)
Mandeha milamina amin'ny fiainana fa tsy mba misehoseho. saingy manao sary aho.
Lunaape/Skach/Eenglush Huluniixsowaakan niishalohkeemeew shkooluw paambiil / Ontario / Mpampianatra / Mpianatra teny Munsee efa hatry ny ela/M.Ed Queens / Orillia Suns ?, Nalahii-Munsee/Orillia/Toronto
30 Mey- 5 Jona:
#Hetsika fanentanana amin'ny famelomana indray ny teny Gwichin; miaro ny iray amin'ireo tenim-pirenena teratany tena tandindonin-doza indrindra, efa ao amin'ny Youtube ny Horonantsary fanadihadiana #SpeakGwichinToMe ! YouTube! https://t.co/GGkjJCPBsj
June 6-12: / 6-12 Jona:
Mpiara-mitantana ny CoLang, mpitana tranomboky, mpanao hatsikana amin'ny teny Karuk, káru karuk araráhih chúuphaan. Velom-pankasitrahana fa tafaverina ao amin'ny tany Wiyot. avaratr'i Kalifornia,http://colang.lin.ufl.edu
Ǧvu̓íxƛaṇugva Haíɫzaqvq̓amṇugva – Raven no anarako & #Haíɫzaqv aho. Mpianatra, mpiteny ary mpampianatra mavitrika ny teny Haíɫzaqvḷa aho #speakyourlanguage, Bella Bella 1, British Columbia
Fihaonana erantanin'ny tenim-pirenena teratany, North Fond du Lac, WI
Mei Jeanne Wagner (aloha_aina)